Ngaba singacela ukuNgcono ekuzithengiseni? | Martech Zone
le ibhaso spoof ividiyo intle. Eyona nto ihlekisayo ihlala ibonakala ngathi inyanisekile, kwaye ukuhanjiswa kwamabhaso ngokuqinisekileyo kuyahlekisa. Andiyiyo imbasa yokukhupha Poooot iyonke; Ndiyakholelwa ukuba ukwamkelwa kweshishini kunyanzelekile. Inika ubungqina begunya lakho kwaye yakha ulwazi kubaphulaphuli abafanelekileyo.
Sinento engakholelekiyo arhente yobudlelwane noluntu ukuba sisebenza kunye. Bazalise izandla zabo kuthi, betyhala imveliso yethu (le mpapasho) njengesixhobo, sethu arhente yentengiso yedijithali njengenkokeli, uJenn njenge Ukuthengisa iMC kunye nesithethi, kunye nam njenge isikhokeli sentengiso. Into emnandi malunga nabantu bethu be-PR kukuba bahlala betyhala ukuba sizihlule. ukuzazisa ongenazintloni. Ugh.
Uxolo ngomtya odikayo wokuzazisa ongenazintloni ngamakhonkco e-buzzworthy. Ndinetyala, nam.
Andiqinisekanga ukuba imigca iphazanyisiwe phakathi kwe-ego kunye nokuzithemba, kodwa akukho lula. Phakathi kwesifundo esenziwe enkonkxiweyo apho ukhetha kuphela ezona ziphumo zibalaseleyo uzifumeneyo, ekuqokeleleni ii-buzzwords, kwizifundo ezinamathanga - konke kuyancwina. Ngoku ndiyazi ukuba kunjani ukubhala iintetho zopolitiko, iimpendulo zeRFP, kunye nokukhutshwa kweendaba ukuze uphile.
Namhlanje ndikhuphe ibhegi yam ye-schwag kwinkomfa-kwitshaja yefowuni, ukuma kwefowuni, i-USB thumb drive, i-moleskins, i-post-it note pads, kunye nokunye ukuvula ibhotile yebhiya. UJonathan Green, umbhali we Isichazi-magama sikaGreen seSlang, walilanda emva ilizwi i-schwagngekhe uyikholelwe imvelaphi yeli gama:
I-marijuana esemgangathweni ophantsi ibizwa ngokuba yi-ditchweed, schwag, kunye ne-skunkweed.
Ndandihlala ndicinga ukuba i-schwag sisandi sengxowa ye-crap eyenziwe xa ibetha ihotele yenkunkuma yakho Kodwa hayi. Kubi kakhulu ... ukulingana nokuthengisa imbiza ekrwada. Khange ndiyithengise imbiza, kodwa ndinomfanekiso-ngqondweni wokuba unganelisa kangakanani umsebenzi. Ukuthengiswa kwe-Crappy kufuneka kube kubi.
Kufuneka sizithengise, kodwa akufuneki sikwenze njengaye wonke umntu.
Nantsi into endiyicinga ngayo njengoko ndijonga macala onke kumzi mveliso
Inyaniso yokuba kufuneka siyenze ayikuthinteli ukuba sibeyintsusa, nangona kunjalo. Ngenxa kaThixo, bantu, masibeke ingqalelo kwintengiso yethu. Zahlule koontanga bakho kwaye uyeke ukuzama ukubalingisa.
Kulungile, ngeli xesha undisa edolophini kwintengiso yam ethandekayo. 😉
tags: bonisa ibhasoMabhasouzenzele igamaegondiyazithandaukuzithengisa